बले ले प्रेमिका संग पहिलोपटक तीज गीतमा खेले ,अनिता चलाउनेको सुमधुर आवाज ! (भिडियो) – Massive Khabar
Homeमनोरञ्जनबले ले प्रेमिका संग पहिलोपटक तीज गीतमा खेले ,अनिता चलाउनेको सुमधुर आवाज ! (भिडियो)
(श्रोत : लालीगुराँस)
फुलन्देकी आमा बनेका उमेश राई डेटिङमा भेटिए, मस्ती गर्दै ! (भिडियो)
क्याट्रिना र विक्की कौशल रोमान्टिक फिल्ममा सँगै देखिदै ?
स्पिनर सन्दिप लामिछानेको नयाँ गित सार्वजनिक ! ( हेर्नुस भिडियो )